Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha - Warshada wax soo saarka Shiinaha
Shaadhka Polo ee daabacaadda funaanadaha poliester kaamka doorashada...
Suudhka dhididka cad ee jimicsiga Dharka isboortiga Dharka jimicsiga Dharka jimicsiga ragga sui...
Jaakad cusub oo suun qurux badan oo laabta barkinta yoga jaakadda holl...
Shaadhka dhididka ee Hoodies-ka Leh-ka-dhaafka ah ee astaanta gaarka ah E...
Jeans surwaal denim ah oo caruur ah oo tayo sare leh
Dhar-gaaban iyo Dhar-gaaban Ins-gacan-gacan-gacan oo qalin ah...
funaanado 200g 65% Cudbi 35% Polyester Jumlo
Jeans Dharka jilicsan ee ilmaha oo tayo sare leh ayaa dooxay surwaal jiinis lug ah oo ballaaran
Yaraynta denimku aad ayuu uga weyn yahay dharka caadiga ah sababtoo ah miisaankiisa culus. Aqoon-is-weydaarsiga dhamaystirka ee warshadda tolida ka hor inta aan la samayn dharka, denim-ka ayaa horay loo jeexjeexay oo qaabeeyey, laakiin tani waa kaliya tallaabada ugu horreysa ee daaweynta dhimista. Ka hor inta aan la dhigin muunadda warqadda, warshadda dharku waxay sidoo kale u baahan tahay inay cabbirto dhimista marada la dhammeeyey mar kale si loo go'aamiyo cabbirka qayb kasta oo goyn ah marka la gelinayo saamiga warqadda. Guud ahaan, dhimista dhammaan denim suufka ah waxay noqon doontaa qiyaastii 2% ka dib samaynta dharka (waxay kuxirantahay dhar kala duwan iyo qaabab kala duwan) Jeansku waa inay noqdaan kuwo la xidhan karo, waxaana aad muhiim u ah inay yareeyaan oo ay dhigaan warshadda dharka.
Pajama jiilaalka cusub jacquard velvet qaro weyn oo diiran Kuuriyaan macaan oo qurux badan velvet guriga suun kirismas pajamas dharka hurdada ee ilmaha
Xirashada bujaamadu waxay u fiican tahay hurdada. Bajamasku waa jilicsan yihiin oo raaxo leh in la xidho, taas oo aan ku habboonayn hurdada, laakiin sidoo kale ku habboon hurdo qoto dheer.
Xiro dharka jiifka guriga ma aha oo kaliya moodada, laakiin sidoo kale waa dhaqan xikmad leh sababo caafimaad dartood. Iibka bajamaada dumarka ayaa aad uga dhib badan iibsashada dharka. Dharka jiifka waa in uu ahaado mid raaxo leh oo caafimaad qaba.
Jaakadda cusub ee suunka quruxda ee barkinta laabta barkin yoga jaakadda godan oo si degdeg ah u qalalan dhar qallalan jir dhiska ordaya qaabka dheer ee dumarka
Naqshad tayo sare leh oo raaxo leh oo qoorta ah iyo qoorta wanaagsan ayaa hubiya in maqaarkaaga qoorta uusan lahayn cuncun.
Laalaabkii u adkaysta, fududahay in la geliyo bacda, badbaadi wakhtigaaga ka dib nadiifinta.
Dharka la neefsan karo, oo leh hawo wanaagsan, waxay ka saari kartaa qoyaanka iyo kulaylka, waxay yareyn kartaa dhididka ku urura dusha muruqa waxayna sii engejin kartaa oo qabow.
Tignoolajiyada tol fidsan, ma fududa in la dumiyo oo la dhimo khilaafka maqaarka.
Funaanado 200g 65% Cudbi 35% Polyester Jumlo Banaan Unisex T-shaati Premium Rag shaarar madhan oo loogu talagalay Daabacaadda Summada Gaarka ah
muunad arra ngement: muunad diyaar ah, isla markiiba diyaari shixnad. muunad caadi ah 5-10 maalmood oo shaqo gudahood.
Qiimaha muunada ee lagu soo dalacayo inta badan iyadoo lagu saleynayo naqshadda iyo tirada guud. Tusaalaha kharashka waa la soo celin karaa markaad gaadho MOQ 1000PCS qaabkiiba.
Faa'iidada annaga: MOQ hoose, tartan tartan, shaqo gaar ah, dammaanad tayo leh, qalab horumarsan, shaqo kooxeed iib ah iyo in ka badan 100 shaqaale khibrad leh, waqti wax soo saar gaaban, falcelin degdeg ah, gaarsiin degdeg ah, adeegyo iib ka dib oo aad u wanaagsan.
Suudhka dhididka caadiga ah ee jimicsiga Dharka jimicsiga Dharka jimicsiga ragga ku habboon Tababarka Tababarka jimicsiga Dharka iyo orodka ayaa xidha koofiyadaha ragga
92% Polyester 8% Jiritaanka Polyester-ka, Maqaarka ka-hortagga, Awoodda kulaylka, Favorability
Shaqayn tayo sare leh, tolmo fidsan, taam laastikada aan xidhnayn, murqaha duuban
Dharka la neefsan karo ayaa nuugi kara qoyaanka iyo dhididka, maqaarku si xor ah ayuu u neefsan karaa inta lagu jiro jimicsiga
Isticmaalka goobo badan, socod socod, orod, baaskiil wadid, jimicsi, tartan, kubbadda kolayga
Shaadhka dhididka ee Hoodies-ka gaarka ah ee loo yaqaan 'Sweater Hoodies' oo lagu dahaadhay 100% funaanadaha suufka ah ee ragga iyo carruurta
Qoorta shaqaalaha - qoortu waxay ku siinaysaa meel neefsasho iyo raaxo leh. Shaadhka jiilaalka ee Ergonomic dhididka gacmo dheer, katiinadaha feeraha gacmaha dheer, dahaarka sherpa, diiran oo raaxo leh.
Tayada - funaanadaha dhididka ah ee lagu hagaajin karo shuruudahaaga ayaa kufilan raaxo xitaa cimilada qabow.
Aad bay ugu habboon tahay jirdhiska, orodka, kubbadda koleyga, baseball, jimicsiga, isboortiga, yoga, kubbadda cagta, Golf, tennis, baaskiil wadida iyo xirashada kale ee firaaqada.
Waxaan inta badan bixinaa adeegyada jumlada. Siyaasadayadu waa in aan kordhino tirada oo aan hoos u dhigno qiimaha, markaa waxaanu ku soo qaadan doonaa qiimaha ugu fiican sida waafaqsan dalabkaaga.
Dhar-gaaban & Dhar-gaab Ins iibka kulul ee sequins-ka qalinka ah
Tan iyo markii la aasaasay, shirkaddu waxay u hoggaansantay ujeedada badbaadada tayada iyo horumarinta sumcadda. Kooxda hawl-wadeenada xirfada leh oo hufan ayaa tarjumi doona dharka wanaagsan ee cusub. Shirkaddu waxay rabta inay raacdo moodo kaamil ah, si adagna ugu hoggaansanto heshiiska oo ay la samaysato xiriir iskaashi oo muddo dheer oo xasilloon macaamiisha ganacsi ee waaweyn oo leh dabeecad la aamini karo. Suuqa tartanka sii kordheysa, oo leh qaab cusub, tayo xasiloon iyo adeeg feker leh, gaarsiinta waqtiga iyo waxqabadka qiimaha tartanka ayaa ammaan sare ka helay macaamiisha. Mahadcelinta macmiilku waa sharafteena, ku qanacsanaanta macaamiishuna waa raadintayada. Mideeya sawirka shirkadda, xooji maamulka shirkadda oo qaabeeya dhaqanka gaarka ah ee shirkadda
Shaadhka Polo ee daabacaadda funaanadaha polyester-ka ololaha doorashada shaararka dabada qabow 100% cudbi soo baxaysa shaadh-gaaban ee shaadhka polo ee ragga
Sababtoo ah qaabka shaadhka polo asal ahaan waa isku mid, raaxaysigiisu wuxuu noqday meesha ugu weyn ee iibsashada. Shaadhka Polo wuxuu ku dhow yahay jirkaaga. Waa inaad dareentaa raaxo, neefso oo aad nuugtaa dhididka. Sidaa darteed, dharka ayaa u baahan inuu noqdo mid aad u qurux badan.
Marka aad iibsanayso dharka, fiiri nooca suufka loo isticmaalo, in marada la shanley oo la farsameeyay, iyo haddii ay jiraan faahfaahin iyo timo. Qaab dhismeedka dunta 40-ka ah ayaa ugu fiican. Waa mid cidhiidhi ah, laastiig ah, urur dhul luul ah oo waara, qaybo buuxa oo aan si fudud loo qaabayn.
Dharka hoostiisa Warshado Dharka hoose ee Modal feedhyahanka Dharka hoose ee ragga fudud Jumlo iib ah
Cutubyada Iibka: Hal shay
Cabbirka baakidhka keliya: 21X15X5 cm
Miisaanka kaliya ee guud: 0.045 kg
Surwaalka dhididka Jumlada leh Raad-raac dhididka 100% Suurwaalka suufka Jogger Surwaalka Jiilaalka
Waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya ragga iyo dumarka qaabka jirka, sidaas darteed waxaa jira siyaabo kala duwan oo habka loo gooyo surwaalka. Marka xigta, aan si kooban u soo bandhigno farqiga u dhexeeya surwaalka ragga iyo dumarka iyo xiriirkooda qaabdhismeed.
Qaybta dhexda ee jidhka ragga ayaa ah mid hoose, halka qaybta dhexda ee jidhka dumarkana ay ka sarrayso tan ragga, taas oo caddaynaysa in dhererka surwaalka iyo galka tooska ah ee surwaalka dumarka uu ka dheer yahay surwaalka ragga oo isku dherer ah.